Nin 20 sano ku xirnaa Somaliland oo xabsiga laga sii daayay | Universal Somali TV
Maxamed Muuse Gantisa oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa shalay laga sii daayay xabsi ku yaala Magaalada Hargeysa, ka dib labaatan sano oo uu xirnaa.
Maxkamad ku taala Magaalada Hargeysa ayaa sanadkii 2002-dii ninkan ku heshay in uu dilay nin kale oo Itoobiyaan ah. Maxkamadda ayaana ku xukuntay sideed sano oo xarig ah iyo inuu bixiyo magta marxuumka, hase yeeshee Maxamed ayaynaan u suurtagelin inuu helo lacagtii uu magta isaga bixin lahaa, taasoo keentay muddada dheer ee uu xabsiga ku jiray.
Maxamed Muuse Gantisa oo sanadkii 2019-kii ay xabsiga isku barteen Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa ka codsaday in qarashka diyada uu u soo uruuriyo. Coldoon ayayna u suurtagashay in qayb ahaan lacagtaasi uu soo uruuriyo, halka qaybtii kalena ay ehelka marxuumka ka cafiyeen, sidaasi ayuuna Sabtidii xabsiga uga soo baxay.
"2001-dii ayaan xabsiga soo galay, muddo labaatan sano ah ayaana xabsiga ku jiray." Ayuu yiri Maxamed Muuse Gantisa, oo intaa ku daray "21 sano ayaan jiray markaan xabsiga galay, markaas ayaana iigu dambeysay magaalada."
Waxa kaloo uu yiri "Cid iga bixisay lacagta ma haysan, lacag la'aanta intaasoo sano ayaan xabsiga ugu jiray. Reerkeyga meeshaan ma jooggaan. Reerkeyga igama war hayaan, inaan dhintay ayay u haystaan, meesha waa leegu iloobay."
Gantisa ayaa intaa ku daray "Walaalkeyga Muslimka ah ee Ilaahay noo soo diray Cabdimaalik Muuse Coldoon isagaa ii shaqeeyay, oo meesha iga soo saaray. 2019-kii mar lagu soo xiray xabsiga Hargeysa ayaan ka codsaday inuu ii shaqeeyo, intaasoo sanaa xabsiga ku jiraa baan ku dhahay, cid magta iga bixisana ma hayo."
Gantisa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dib uu xorriyadiisa u helo, inkastoo sida uu sheegay aanu garanayn meel uu halkan uga dhaqaaqo, balse uu ku dadaali doono, sidii uu dalkiisa dib ugu labaaban lahaa.
Kan-xigaCiidamada Dowladda oo qarax lagula ee...
Kan-horeAbaar baahsan oo ka jirta Degmada Cee...
60,006,664 unique visits